ရွှေပြည်သူ | Sanchaung Journal
Tag Archives: ရွှေပြည်သူ
သားတို့ ..ဒီမှာ ဘာလာလုပ်နေတာလဲဟင်…?
November 25, 2008 freebird	Leaveacomment
တစ်နေ့မှာ ကုလားအုတ်လေးတစ်ကောင်က သူ့မိခင် ကုလားအုတ်မကြီးကို မေးပါတယ်။
ကုလားအုတ်လေး – မေမေ သားတို့ ကုလားအုတ် တွေမှာ ဘာလို့ဘို့တွေ ရှိတာလဲဟင်?
မိခင် – သားရယ် မေမေတို့က သဲကန္တာရမှာ ကျက်စားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်တွေဆိုတော့ ရေတွေ အများကြီး သိုလှောင်ထားဖို့ ဘို့တွေ လိုတာပေါ့။ ဒါကြောင့် မေမေတို့တွေ ကန္တာရထဲမှာ ရေမသောက်ရလည်းပဲ အသက်ဆက်ရှင်နိုင်တယ်လို့ အားလုံးက သိကြတယ်လေ။
ကုလားအုတ်လေး – ဒါဆိုရင် သားတို့ခြေထောက်တွေက ဘာလို့ရှည်မျောမျောနဲ့ ဖြစ်နေပြီး ခြေဖ၀ါးတွေက ၀ိုင်းဝိုင်းကြီးတွေ ဖြစ်နေတာလဲဟင်?
မိခင် – ဒီခြေထောက်တွေကလည်း သဲကန္တာရထဲမှာ သူများတွေထက် ပိုပြီး လမ်းကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်ဖို့ အတွက်ပေါ့ သားရဲ့။
ကုလားအုတ်လေး – ဟုတ်ကဲ့။ အဲဒါဆို သားတို့မျက်တောင်တွေကရော ဘာလို့အရမ်းရှည်နေတာလဲဟင်။ တစ်ခါတစ်လေ မျက်စိကြည့်ရတာတောင် ရှုပ်တယ်။
မိခင် - အဲဒီမျက်တောင်ရှည်ရှည်လေးတွေက သားမျက်လုံးကို သဲကန္တာရထဲက လေပြင်းတွေ သဲတွေရဲ့ဒဏ်ကနေ ကာကွယ်ပေးထားတဲ့ အကာအကွယ်တွေပေါ့။
ကုလားအုတ်လေး - သြော် သားသိပြီ။ ဒါဆို သားတို့ရဲ့ဘို့က သဲကန္တာရထဲ ရှိနေတဲ့အချိန်မှာ ရေတွေသိုလှောင်ထားဖို့၊ ခြေထောက်တွေကလည်း သဲထဲမှာ ကောင်းကောင်းလျှောက်နိုင်ဖို့၊ မျက်တောင်တွေကလည်း သဲကန္တာရထဲက သဲတွေမျက်လုံးထဲမ၀င်အောင် ကာကွယ်ဖို့ပေါ့နော်။
မိခင် – ဒါပေါ့သားရဲ့
ကုလားအုတ်လေး - ဒါဆို သားတစ်ခုလောက် မေးချင်သေးတယ်။
မိခင် – ဘာများလဲသားရဲ့?
ကုလားအုတ်လေး - သားတို့ ဒီတိရိစ္ဆာန်ရုံထဲမှာ ဘာလာလုပ်နေတာလဲဟင်…?
မိခင် – …………………………………………………..
လူတစ်ယောက်ရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ဗဟုသုတ၊ စွမ်းရည် နဲ့ အတွေ့အကြုံဆိုတာတွေက နေရာမှန်တစ်ခုကို ရောက်နေမှ တကယ်အသုံးကျတာပါ။
source : http://shwepyithu.blogspot.com/2008/03/blog-post_08.html
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ မေးခွန်းအမေးခံရမှာ အရမ်းကြောက်ကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့ တစ်တွေ မေးခွန်းတချို့ ကို သေချာစွာဖြေဆိုဖို့ လိုအပ်မယ်လို ယူဆမိပါတယ်။